Abenzi nabathengisi abaphathekayo - Ifektri ephathekayo yaseChina
I-BA200 ephathekayo i-algae analyzer eluhlaza okwesibhakabhaka
I-analzer analyzer ephathekayo oluhlaza okwesibhakabhaka nohlaza yakhiwa ngumgcini ophathekayo kanye nenzwa ephathekayo ye-algae eluhlaza okwesibhakabhaka. Ngokusebenzisa isici sokuthi i-cyanobacteria inokuphakama kokumunca nokuphakama kokukhipha ku-spectrum, zikhipha ukukhanya kwe-monochromatic kobude obuthile emanzini. I-cyanobacteria emanzini imunca amandla wokukhanya kwe-monochromatic bese ikhipha ukukhanya kwe-monochromatic kobunye ubude bemisebe. Amandla okukhanya akhishwa ulwelwe oluhlaza okwesibhakabhaka nohlaza alingana nokuqukethwe yi-cyanobacteria emanzini.
I-CH200 ephathekayo ephathekayo ye-chlorophyll
Isiphathamandla se-chlorophyll ephathekayo sakhiwe nge-host ephathekayo nenzwa ephathekayo ye-chlorophyll. Inzwa ye-chlorophyll isebenzisa iziqongo zokumunca i-pigment ku-spectra kanye ne-emission peak yezakhiwo, kububanzi be-chlorophyll ukumunca ukuphakama kokukhishwa kokukhanya kokukhanya kwe-monochromatic emanzini, i-chlorophyll ekumuncweni kwamanzi yamandla okukhanya futhi ikhulule okunye ukuphakama kokuphakama kokukhanya kokukhanya kwe-monochromatic, i-chlorophyll, amandla okukhipha alingana nokuqukethwe kwe-chlorophyll emanzini.
Umhloli we-CON200 ophethwe ngesandla ophethwe ngokukhethekile wenzelwe ukuhlolwa kwamapharamitha amaningi, ukuhlinzeka ngesixazululo sokuma esisodwa sokuqhuba, i-TDS, usawoti kanye nokuhlolwa kokushisa. Imikhiqizo yochungechunge lwe-CON200 enomqondo wokuklama oqondile futhi osebenzayo ukusebenza okulula, imisebenzi enamandla, imingcele ephelele yokulinganisa, ububanzi bokulinganisa obubanzi;
Imikhiqizo yochungechunge lwe-DH200 enomqondo wokuklama oqondile futhi osebenzayo; imitha ephathekayo ye-DH200 echithakele imitha ye-Hydrogen: Ukukala amanzi acebile e-Hydrogen, Ukuhlakazeka kwe-Hydrogen okuncibilikisiwe kukhiqizi wamanzi we-Hydrogen. Futhi ikwenza ukwazi ukukala i-ORP emanzini kagesi.
Isixazululo esiphezulu esincibilikisiwe somhloli we-oxygen sinezinzuzo eziningi emikhakheni ehlukahlukene njengamanzi angcolile, i-aquaculture nokuvutshelwa, njll.
Ukusebenza okulula, imisebenzi enamandla, imingcele ephelele yokulinganisa, ububanzi bokulinganisa obubanzi;
ukhiye owodwa wokulinganisa nokuhlonza okuzenzakalelayo ukuqedela inqubo yokulungisa; isikhombimsebenzisi esibonakalayo esicacile nesifundekayo, ukusebenza okuhle kakhulu kokulwa nokuphazamiseka, ukukala okunembile, ukusebenza okulula, kuhlanganiswe nokukhanya okuphezulu kokukhanya kwangemuva;
I-DO200 iyithuluzi lakho lokuhlola lochwepheshe nomlingani onokwethenjelwa kumalabhorethri, imihlangano yokufundisa kanye nezikole umsebenzi wokulinganisa nsuku zonke.
PH200 ephathekayo PH / ORP / lon / Imitha Yesikhashana
Imikhiqizo yochungechunge lwe-PH200 enomqondo wokuklama oqondile futhi osebenzayo;
Amasethi amane anamanzi ayi-11 ajwayelekile, ukhiye owodwa wokulinganisa nokuhlonza okuzenzakalelayo ukuqedela inqubo yokulungisa;
Isibonisi esibonakalayo esicacile nesifundekayo, ukusebenza okuhle kakhulu kokuphazamisa, ukukala okunembile, ukusebenza okulula, kuhlanganiswe nokukhanya okuphezulu kokukhanya kwangemuva;
I-PH200 iyithuluzi lakho lokuhlola lochwepheshe nomlingani onokwethenjelwa kumalabhorethri, ama-workshops nezikole umsebenzi wokulinganisa nsuku zonke.
I-TSS200 Ephathekayo Esimisiwe Solids Analyzer
Okuqinile okumisiwe kubhekisa ezintweni eziqinile ezimiswe emanzini, kufaka phakathi izinto ezingaphili, izinto eziphilayo kanye nesihlabathi sobumba, ubumba, ama-microorganisms, njll. Lokho akuncibiliki emanzini. Okuqukethwe okumisiwe emanzini kungenye yezinkomba zokukala izinga lokungcola kwamanzi.
I-TUR200 ephathekayo ephathekayo i-Analyzer
Imfucumfucu ibhekisa ezingeni lokuvinjelwa okubangelwe yisisombululo ekudlulisweni kokukhanya. Kubandakanya ukusakazwa kokukhanya yizinto ezimisiwe nokumunca ukukhanya ngama-molecule e-solute. Ukushoda kwamanzi akuhlobene nje kuphela nokuqukethwe yindaba emisiwe emanzini, kodwa futhi kuhlobene nosayizi, ukwakheka kwawo kanye ne-coefficient yokuthanjiswa kwawo.
Umhloli ophathekayo ophathekayo ungasetshenziswa kabanzi eminyangweni yokuvikela imvelo, amanzi ompompi, indle, ukuhlinzekwa kwamanzi kamasipala, amanzi ezimboni, amakolishi kahulumeni namanyuvesi, imboni yezemithi, ezempilo kanye nokulawulwa kwezifo neminye iminyango yokunqunywa kobunzima, hhayi kuphela emkhakheni kanye nokuhlolwa okuphuthumayo kwekhwalithi yamanzi esizeni esizeni, kodwa futhi nokuhlaziywa kwekhwalithi yelabhorethri yamanzi.
Ph Inzwa electrode, Isizweli sokusebenza se-Quadrupole Graphite, Inzwa Yokusebenza Kwe-Electromagnetic, Inzwa yeChlorophyll, Inzwa yokuqhuba ye-TDS, Inzwa Yokusebenza Kwenethiwekhi yeTitanium,